Imfashini yamadoda kwi-Instagram njengoko ibonwa kwiiCelebs nakwindlela yokuphembelela
Fi-ashion, njengomculo, yinto edibanisa abantu. Kule meko, izisa oosaziwayo abangama-Afrika abavela kwilizwekazi liphela kunye kuluhlu lwethu olunxibe kakuhle. Iindlela zemfashini yamadoda kwi-instagram
Ifashoni ikwayinxalenye yenkcubeko ephakamisa abantu ngaphandle kwemeko. Sibonile ukuba kwinqanaba lokuqala lo bhubhane xa wonke umntu wayefuneka ukuba ahlale ekhaya. Naxa uhleli yedwa, abantu abadumileyo base-Afrika bafumana indlela yokuhlala betyile.
Kule veki iphelileyo, ukuvalwa okunqumileyo kumazwe amaninzi ase-Afrika kuhlaziywe, amanye amadoda ezizwekazi ezithandekayo abuyela ezitratweni ngesitayile se-dapper, nanjengoko abanye besamkela indlela eqhelekileyo yendlela yabo yokubuya. Iindlela zemfashini yamadoda kwi-instagram
Ukukhokela iqela elisemthethweni, inkokheli yeTV yaseNigeria, Ebuka Obi-Uchendu Wajonga isidlo sangokuhlwa kwisitya sakhe esingabonakaliyo sejarti. Yakhiwe ngokugqibeleleyo, ibhatyi yadityaniswa neebhulukhwe ezimnyama, yaza yabekwa ngaphezulu kwe-turtleneck emnyama ngaphezulu. Ugqibile ukujonga ecaleni ephethe iibhotile ezimnyama eziphakamileyo.
Ngapha eMzantsi Afrika, umdlali weqonga UAaron Moloisi ndinxibe imozulu kwisiqwengana se-3, zonke ihempe emnyama. Enxibe ibhatyi emnyama yebhulukhwe kunye nebhulukhwe phezu kwehempe emnyama, wasondeza imbonakalo kunye nengubo emnyama yepeya. Kwizihlangu, wahamba kunye nesicoci esimnyama esimnyama esimnyama esimnyama kunye nokufakelwa kumtya omnyama nomhlophe oqaqanjisiweyo. Iindlela zemfashini yamadoda kwi-instagram. Umxholo obiwe kwi STYLERAVE.COM
Aaron Moloisi - uMzantsi Afrika
Wayenayo iveki njengoko imbonakalo yakhe imasikizi yayiyeyona nto iphambili ukujongwa, ukubona indlela akwazi ngayo ukulinganisa ukhuseleko, intuthuzelo kunye nesitayela.
Abanye abantu abadumileyo abangamadoda kunye nabaphembelelayo nabo bangena ngesitayile esifanelekileyo seRave kunye nokhuthazo lwakho, siye safumana eyona nto ilungileyo! Iindlela zemfashini yamadoda kwi-instagram
Jonga abadumileyo ababhinqileyo ababhinqileyo ababhinqileyo kwiveki ephelileyo…
I-Do2dTun - ENigeria
Juma Jux -Tanzania
UTobi Bakre - eNigeria
UZamani Mbatha - uMzantsi Afrika
Iindaba zomntu o-african Imfashoni yeentombazana zaseAfrika isitayela samadoda amnyama Uhlobo lomntu Abantu abadumileyo baseAfrika Okufumaneka Isitayile eshushu eshushu isitayile sobudoda Imfashini yomntu waseNigeria Iindaba zomntu waseNigeria IFASHONI YAMADODA WESANDLA